အနာဂတ်မှာ ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျခြင်းမရှိဘဲ စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီး (သို့) ကျနော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာ ဘာတွေပဲဖြစ်ပျက်နေပါစေ၊ ငြိမ်သက်မှုရနိုင်မယ့်နေရာတစ်နေရာ ရှိပါသလား? ဘဝအခြေအနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့အခြေအနေတွေကို အမှုမထားဘဲ အနာဂတ်ကို မျှော်လင့်ချက်နဲ့ မျှော်ကြည့်နိုင်ပါသလား? မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ကျောင်းသားများစွာဟာ ဘုရားရဲ့တန်ဖိုးကို မပြောင်းလဲတဲ့ကိန်းသေ တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်နေကြပါပြီ။ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာကြီးဟာ အမြဲပြောင်းလဲနေပေမယ့် ဘုရားကတော့ မပြောင်းလဲပါဘူး။ သူဟာ တည်ကြည်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက “ငါမှတပါး အခြားသောဘုရားသခင် ရှိသလော။ ငါမှတပါး အခြားသောမူလ အမြစ်မရှိ။ တစ်စုံတစ်ဦးကိုမျှ ငါမသိ။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ။”၁ လို့ မိန့်ဆိုပါတယ်။ ဘုရားဟာ အစဉ်တည်ရှိနေပါတယ်။ သူ့ကိုအမြဲကိုးစားနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ “မနေ့၊ ယနေ့၊ နောင်ကာလ အစဉ်အမြဲ မပြောင်းမလဲ နေတော်မူ”၂ ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့နှလုံးသားကို ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူစေကာ သူ့အားဖြင့် စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို ပေးခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ ဖွင့်ပြနိုင်ပါတယ်။
စတန်းဖို့တက္ကသိုလ်မှ မကြာခင်ကကျောင်းပြီးသူ ဟီသာက ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ် - “ဘုရားနဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိ တာဟာ အံ့သြဖွယ်ရာနဲ့ လှပတဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါပဲ။ တကမ္ဘာလုံးနဲ့ကျနော်မလဲနိုင်တဲ့ အလွန်အရေးပါတဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို နက်ရှိုင်းစွာ သိနားလည်ပြီး ချစ်တဲ့အတွက် ကျနော် ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ်။”
သွေးမတိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင် ကျောင်းသားလေး စတီးဗ်ဆောယာဟာ သွေးသွင်းရာကနေ အိတ်ချ်အိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်ထား ကြောင်း သိရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ငြိမ်သက်မှုကို ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ အစမှာ စတီးဗ်ဟာ အရမ်းကို မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေခဲ့တယ်။ ဘုရားကိုအပြစ်တင်တယ်။ ပြီးမှ ဘုရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်။ အဲဒီအခါမှာ- သူ့ဘဝရဲ့ကျန်ရှိတဲ့နှစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ စတီးဗ်ဟာ သူ့လိုကျောင်းသားချင်းတွေထံမှာ ဘုရားကိုသိရှိရာမှ သူတွေ့ကြုံခံစားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ဘုရားကို သူတို့ဘယ်လိုသိရှိနိုင်ကြောင်း ပြောပြဖို့ မရေတွက်နိုင်တဲ့ကျောင်းဝင်းပေါင်းများစွာကို ခရီးထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဘုရား သခင်က “ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အား ငါပေး၏။ လောကီသားတို့ပေးသကဲ့သို့ ငါပေးသည်မဟုတ်။ သင်တို့စိတ်နှလုံး ပူပန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိစေနှင့်။ သင်တို့သည် လောက၌ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံကြရလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မစိုးရိမ် ကြနှင့်။ ငါသည် လောကကိုအောင်ပြီ”၃ လို့ မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
စတီးဗ်လိုပဲ တခြားကျောင်းသားများစွာတို့ဟာ ဒီဘဝမှာဘာပဲဖြစ်ပျက်နေပါစေ၊ ဒါဟာ “ကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံး” မဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကမ္ဘာဟာ အဆုံးမဟုတ်သေးလို့ပါပဲဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ကြပါပြီ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် လူတွေဟာ ဘုရားဆီလှည့်မလာခင် အခြေအနေတွေ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အထိ စောင့်ဆိုင်းနေတတ် ကြတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက တပ်တွင်းအမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးက “ကတုတ်ကျင်းထဲမှာ ဘယ်သူမှဘုရားမဲ့ဝါဒီ လုပ်လို့မရဘူး။” လို့ ပြောပြပါတယ်။ ဘဝဟာ ပန်းခင်းလမ်းလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ လူတွေ ဘုရားလိုအပ်တယ်လို့ မထင်တတ် ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘဝမှာ အကျပ်အတည်းထဲရောက်လာပြီ၊ ကတုတ်ကျင်းထဲရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ပြောင်းလဲသွား တတ်တယ်။
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး ကဲရင်းက သူမဘုရားကိုဘယ်လိုတွေ့ရှိလာသလဲဆိုတာကို ခုလိုပြောပြပါတယ်- “ကျမကိုယ်ကျမ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်လို့ထင်ခဲ့တာ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင် ဘုရားကျောင်းသွားလေ့ရှိ တယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။ ကျမအထက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်မှာလည်း ကျန်တဲ့သုံးနှစ်စလုံးမှာလိုပါပဲ။ တစ်ချိန်လုံးလိုလို အရက်မူးတယ်၊ ဆေးသုံးတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ့်ကိုချစ်မယ့်သူ တစ်ယောက်ယောက်ကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ရှာတယ်။ ကျမအတွင်းထဲမှာတော့ သေလုနီးပါးဖြစ်ပြီး ဘဝကိုထိန်းချုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒီဘဝကိုရပ်တန့်ပစ်ချင်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါ ဘဝအတွက်မျှော်လင့် ချက်တွေကို ရှာဖွေရမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါဟာ ဘုရားကို ကျမဘဝထဲဝင်ရောက်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ပြည့်စုံသွားပါတယ်။ သူဟာ ကျမကို မေတ္တာ၊ လုံခြုံမှု၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ အားပေးမှု၊ နှစ်သိမ့်မှု၊ လက်ခံမှု၊ ပြီးတော့ ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ပြခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကျမအတွက် ခွန်အားဖြစ်ပြီး ဘဝဟာ သူ့အတွက်သာမဟုတ်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ ကျမဘဝ ရပ်တည်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။”
အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူသိပါ့မလဲ? ကျောင်းသူ/သားများစွာဟာ စစ်မြေပြင်ကတုတ်ကျင်းတွေထဲ ရောက်နေသလို ခံစားကောင်းခံစားကြမယ်။ ဘဝဟာ စစ်ပွဲတစ်ခုလို ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့စိတ်အေးချမ်းသာမှုဟာ ခြိမ်းခြောက်ခံရနိုင်တယ်။ အဲဒီလို အပူမီးတွေဝိုင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှသာ ကျနော်တို့ဟာ ဘုရားထံကိုဦးလှည့်တတ်ကြတာပါ။ ဒါကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုရင် အစဉ်တည်မြဲတဲ့ဘုရားရှိနေပြီး အမှန်ဆိုသူဟာ ကျနော်တို့ဘဝထဲကို ဝင်ရောက်လာချင် နေတာပါ။ သူက “ငါတစ်ပါးသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၍၊ ငါမှတပါး ကယ်တင်သောသခင်မရှိ။.. ငါ့ကိုမျှော်ကြည့်၍၊ ကယ်တင် ခြင်းကျေးဇူးကိုခံကြလော့။ ငါသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ ငါမှတပါး အခြားသောဘုရားမရှိ။”၄ လို့ မိန့်မြွက်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘုရားသခင်ကို “အကူအညီ” တစ်ခုလို တွေးမြင်နိုင်ပါတယ်။ သူသာလျှင် အမှန်တကယ် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံ မှန်ကန်တဲ့ အကူအညီပဲဖြစ်ပါတယ်။
တချို့လူတွေကျတော့ ဘဝအဆင်ပြေချောမွေ့နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် ဘုရားဆီကို ဦးလှည့်တတ်ကြတယ်။ တက္ကဆပ်က ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျွန်က “ကျနော့်နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ကျေနပ်မှုရစေမယ်လို့ လူတွေပြောတတ်ကြတဲ့ အရာ အားလုံးကို ကျနော်ရရှိခဲ့တယ်။ ကျောင်းဝင်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ခေါင်းဆောင်နေရာရတာတို့၊ ပါတီပွဲတို့၊ အမှတ်ကောင်း ကောင်းရတာတို့၊ ကျနော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ ဒိတ်ခွင့်ရတာတို့ပေါ့။ ကောလိပ်မှာနေစဉ် ကျနော်လုပ်ချင်၊ အောင်မြင်ချင်တာခဲ့တာတွေ အားလုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျေနပ်မှုမရခဲ့သေးဘူးဗျာ။ တစ်ခုခုဟာနေတုန်းပဲ။ တခြားရှာရမယ့်နေရာလည်း မရှိတော့ဘူး။ ကျနော်ဒီလိုခံစားနေရတာကိုတော့ ဘယ်သူမှမသိကြဘူး -- အပြင်ပန်းမှာ ကျနော်မပြဘူးလေ။”
အရာရာအဆင်ပြေနေတဲ့အခါမှာတောင် ဘဝမှာ ကတုတ်ကျင်းတစ်ခု ရှိနေနိုင်ပါတယ် -- မျက်စိနဲ့မတွေ့ရဘဲ နှလုံးသားက ခံစားရတဲ့ အတွင်းစိတ်ထဲမှာပေါ့။ အီလီနွိုက်စ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘက်ကီက ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ခုလိုပြောပါတယ်- “ဒီအဝတ်အစားလေးကိုဝတ်ရမှ၊ ဒီကောင်လေးနဲ့ရည်းစားဖြစ်မှ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီနေရာကိုသွားလည်ပတ်ရမှ သင့်ဘဝသာ ယာပြီး ပြီးပြည့်စုံမယ်လို့ ဘယ်နှစ်ခါလောက် စဉ်းစားဖူးသလဲ? ပြီးတော့ အဲဒီရှပ်အင်္ကျီကိုဝယ်ပြီး၊ အဲဒီကောင်လေးနဲ့ဒိတ်ပြီး၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီနေရာကိုလည်ပတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့အခါ အရင်ကထက်ကို ပိုပြီး စိတ်ထဲဟာတာတာနေတာမျိုး ဘယ်နှစ်ခါ ကြုံဖူးပါသလဲ?”
စစ်ကတုတ်ကျင်းမျိုးကိုခံစားရဖို့ ရှုံးနိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုခု ကြုံတွေ့ဖို့တောင် မလိုပါဘူး။ ကျနော်တို့ဘဝထဲ ဘုရားမပါရှိတာကိုက ငြိမ်သက်ခြင်းဆိတ်သုန်းနေတာမျိုး ခံစားကြရတာပါ။ ဘက်ကီက သူဘုရားကိုသိရှိလာပုံကို “အဲဒီ နောက်ပိုင်းလည်း ကျမဘဝမှာ အခက်အခဲနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးကြုံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်မှာ မေတ္တာနဲ့ချစ်နေတဲ့ ထာဝရဘုရား ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရတဲ့အတွက် ကိုယ်လုပ်သမျှကို အတွေးအမြင်သစ်နဲ့ လုပ်နိုင်ပါ တယ်။ ဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူသာဆို မဖြေရှင်းနိုင်တာမရှိဘူးလို့ ကျမယုံကြည်တယ် -- ပြီးတော့ ကျမကြိုးစားရှာဖွေလာ နေခဲ့တဲ့ ပြည့်စုံမှုကိုတော့ နောက်ဆုံးမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။”
ကျနော်တို့ဘဝထဲ ဘုရားပါဝင်တယ်ဆို ကျနော်တို့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အနားယူနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားကိုသိလာပြီးတော့ သမ္မာ ကျမ်းစာထဲမှာ သူပြောခဲ့တာတွေကို ဖတ်ရှုလိုက်နာမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဘဝထဲကို အဲဒီစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကို သူဆောင်ကျဉ်း ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့သူ့ကိုသိရှိပိုင်ဆိုင်လို့ပါပဲ။ သူ့ရဲ့တည်ကြည်ခြင်းနဲ့ ကျနော်တို့အပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်စွမ်းတွေကို မြင်တွေ့လာပြီး ဘဝကို သူ့ရဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ ကြည့်မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အနာဂတ်မှာဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ ဘုရားသခင်ထံမှာ ကျနော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကို တည်ထားနိုင်ပါတယ်။
စစ်မှန်သောစိတ်အေးချမ်းသာမှု - ကျောက်ပေါ်၌တည်သောအိမ်
သင့်ဘဝကို တစုံတခုအပေါ် တည်ထားပါသလား? အမှန်ပြောရရင် လူတိုင်းဟာ တစုံတခုအပေါ် တည်မှီကြတာချည်းပါ။ ကျနော်တို့ တစ်ဦးစီမှာ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုစီရှိပါတယ်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ယုံကြည်မှုကို တည်ထားတဲ့အရာ ပေါ့။ မိမိကိုယ်မိမိလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် -- “ငါကြိုးစားရင် ငါ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင် ငါလုပ်နိုင်တာပဲ” လို့။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ့်ဘဝပုံစံအပေါ်ပေါ့ -- “ငါ ငွေအများကြီးရှာနိုင်ရင် ဘဝဟာသာယာမှာပဲ” လို့လေ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း အချိန်ကာလ တစ်ခုခုပေါ်မှာပေါ့ -- “အနာဂတ်က အရာရာကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာပါ” လို့ ထင်ရင်ထင်မယ်။
ဘုရားမှာတော့ ကွဲပြားတဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ယုံကြည်မှုကို မိမိကိုယ်ကို၊ တခြားလူတွေပေါ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီလောကကပေးတဲ့ အရာတစ်ခုခုပေါ်မှာ တည်မှီထားရင် ဒါဟာ မခိုင်မာတဲ့အခြေပါပဲလို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဒီဟာတွေထက် သူ့အပေါ် ကျနော်တို့ကို တည်မှီစေချင်တာပါ။ သူက “အကြင်သူသည် ငါဟောပြောသော ဤစကားကို ကြား၍ နားထောင်၏။ ထိုသူသည် ကျောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သော ပညာရှိနှင့်တူကြောင်းကို ငါပုံပြမည်။ မိုးရွာ၍ရေစီး သည်နှင့် လေလာ၍ ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသော်၊ ကျောက်ပေါ်မှာတည်သောကြောင့် မပြိုမလဲနေ၏။ အကြင်သူသည် ငါဟောပြောသော ဤစကားကိုကြား၍ နားမထောင်ဘဲနေ၏။ ထိုသူသည် သဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သော လူမိုက်နှင့်တူ ကြောင်းကို ငါပုံပြမည်။ မိုဃ်းရွာ၍ရေစီးသည်နှင့် လေလာ၍ ထိုအိမ်ကိုတိုက်သောအခါ၊ ကြီးစွာသောပြိုလဲခြင်းသို့ ရောက်လေသည်”၅ လို့ ဟောတော်မူပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘဝမုန်တိုင်းတွေလာတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျနော်တို့ဘဝမှာ ဘုရားပါဝင်နေတာဟာ ပညာရှိရာကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားရဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းကတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက် ကျနော်တို့ကို ပိုမိုကြွယ်ဝသောအသက် တာကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ပါပဲ။ သူက ကျနော်တို့ရဲ့ဘဝနယ်ပယ်တိုင်းမှာ အပေါင်းလက္ခဏာဆန်တဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ရရှိလိုပါတယ်။
တချို့က ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာချမ်းသာတဲ့သူရဲ့ သားဖြစ်နေရတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်း အသာလေးရနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ ထင်နေတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိနေ ရင်တော့ များစွာကြီးမားတဲ့လုံခြုံမှု ရှိပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ တန်ခိုးအာဏာကြီးမားပါတယ်။ ကျနော်တို့နဲမတူ၊ ဘုရားသခင်ဟာ မနက်ဖြန်မှာ၊ နောက်အပတ်မှာ၊ နောက်နှစ်မှာ၊ နောက်ဆယ်စုနှစ်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို သိပါတယ်။ သူက “ငါသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ ငါမှတပါး အခြား သောဘုရားမရှိ။ အဦးမှစ၍ အဆုံးတိုင်အောင်လည်းကောင်း … ဖော်ပြလျက်.. ငါ့အလိုရှိသမျှကို ငါပြည့်စုံစေမည်”၆ လို့ ဆိုပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သူသိပါတယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက ကျနော်တို့ဘဝမှာ ဘာဖြစ်လာမယ်၊ သူ့ကိုလက်ခံရရှိထားတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစိတ်ချနေနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ “ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ခိုလှုံရာဖြစ်၍၊ ခွန်အားကို ပေးတော်မူ၏။ ဘေးရောက်သည့်ကာလ အထူးသဖြင့် ကူမတော်မူကြောင်း ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။”၇ လို့ သမ္မာကျမ်း စာက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ အရိုးခံစိတ်နဲ့ ရှာဖွေဖို့ပါပဲ။ သူက “ငါ့ကိုရှာသောအခါ စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့နှင့်ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်”၈ လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘုရားကိုသိရှိတဲ့လူဟာ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကို မဖြတ်သန်းရဘူးလို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဖြတ်သန်းရမှာပါ။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ အကြမ်းဖက်သူများရဲ့တိုက်ခိုက်မှု၊ သဘာဝဝန်းကျင် မဟုတ်ရင် စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်မှုတွေကို ကြုံတွေ့နေရင် အဲဒီဘေးဒုက္ခထဲမှာ ဘုရားကိုသိရှိတဲ့လူတွေလည်း ပါဝင်နေမှာပါပဲ။ သို့သော်လည်း၊ ဘုရားအတူပါရှိခြင်းက ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ခွန် အားကို ပေးစွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တစ်ဦးက ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်- “ငါတို့သည် အမျိုးမျိုးသော နှောင့်ယှက်ခြင်းကို ခံရသော်လည်း အကျိုးနည်းခြင်းသို့မရောက်။ မကြံစည်နိုင်အောင်ရှိသော်လည်း စိတ်မပျက်။ ညှင်းဆဲ ခြင်းကိုခံရသော်လည်း ရှုံးခြင်းမရှိ။ အောက်သို့လှဲခြင်းကိုခံရသော်လည်း ဆုံးရာသို့မရောက်။”၉ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့ ဘဝက ကျနော်တို့ ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ ပြောနေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်မှုပြုပြီး ရင်ဆိုင်နေ တယ်ဆိုရင် ပြဿနာတွေကို ကွဲပြားတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့၊ ပြီးတော့ ကျနော်တို့မှာမရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ တုန့်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ပြဿနာကမှ ဘုရားသခင် မကျော်လွှားနိုင်လောက်တဲ့ အစွမ်းမရှိပါဘူး။ သူဟာ ကျနော်တို့ကို အလဲထိုးနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေအားလုံးထက် ပိုကြီးမားပြီး၊ ဒါတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ စွန့်ပစ်မခံရပါဘူး။
ဘုရားသခင် ဂရုစိုက်တော်မူတယ်။ ကျနော်တို့အသက်တာမှာ ထင်ရှားနိုင်တဲ့ ဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့တန်ခိုးတော်ဟာ သူ့ရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့မေတ္တာနဲ့ အစဉ်ဒွန်တွဲပါတယ်။ အနာဂတ်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှမကြုံဖူးတဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကာလ ဖြစ်လာချင် ဖြစ်လာမယ်၊ သို့မဟုတ် လူမျိုးစုမုန်းတီးရေးနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ လင်မယားကွာရှင်းပြတ်စဲမှုတွေ ပိုမိုထူပြောလာချင် ထူပြောလာလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားသခင် ကျနော်တို့ကိုချစ်သလောက် ဘယ်သူကမှ ချစ်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင် ဂရုစိုက်သလောက် ဘယ်သူကမှ ဂရုစိုက်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့နှုတ်ကပါတ်တော်က “ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းတော်မူ၏။ အမှုရောက်သောအခါ ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏။ ခိုလှုံသောသူတို့ကို သိမှတ်တော်မူ၏။”၁ဝ လို့ ကျနော်တို့ကို ပြောပြနေပါတယ်။ “သင်တို့ကို သတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်၊ သင်တို့၌ စိုးရိမ်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကို ကိုယ်တော်၌ အပ်နှံကြလော့။”၁၁ လို့ဆိုတယ်။ ဒါ့အပြင် “ထာဝရဘုရားဘုရား၏ လမ်းခရီးတော်ရှိသမျှတို့ [ပြုလေသမျှသောအရာတို့] သည် ဖြောင့်မတ်၍၊ ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့သည် သန့်ရှင်းကြပါ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ပတ္ထနာပြုသောသူအပေါင်း၊ သစ္စာနှင့် တကွ ပတ္ထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၏ အနီးအပါး၌ ရှိတော်မူ၏။ [မိမိအား] ကြောက်ရွံသောသူတို့၏အလိုကို ပြည့်စုံစေ တော်မူ၏။ ထိုသူတို့၏ အော်ဟစ်ခြင်းကိုကြား၍ ကယ်တင်တော်မူ၏။”၁၂ လို့ မိန့်ဆိုထားပါတယ်။
ယေရှုခရစ်တော်က တပည့်တော်များကို ဒီလိုနှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့တယ်- “စာငှက်နှစ်ကောင်ကို အဿရိတစ်ပြားအဖိုးနှင့် ဝယ်ရသည်မဟုတ်လော။ သင်တို့အဘ အခွင့်မရှိလျှင် ထိုစာငှက်တစ်ကောင်မျှ မြေသို့မကျရ။ သင်တို့ဆံပင်သည်လည်း အကုန်အစင် ရေတွက်လျက်ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့သည် စာငှက်အများတို့ထက် သာ၍မြတ်ကြ၏။”၁၃ ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားရင် ဘယ်သူနဲ့မျှ၊ ဘယ်လိုနဲ့မျှမတူ သင့်ကိုကွယ်ကာစောင့်မမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်မှာဘာရှိတယ် ကျနော်တို့မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ အကျပ်အတည်းတွေရောက်လာရင် ဘုရားသခင် ကျနော်တို့အတွက် ရှိနေပါတယ်။ အဆင်ပြေမှုတွေလာရင်လည်းပဲ ကျနော်တို့နှလုံးသာထဲက ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့၊ ဘဝအဓိပ္ပာယ်ကို ပေးဖို့ ဘုရားသခင်ကို ကျနော်တို့လိုအပ်နေတုန်းပါပဲ။
ကျနော်တို့ ဒါတွေပြောလာပြီးနောက်မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ? တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်က ကျနော်တို့ဟာ ဘုရားဆီ ကနေ သီးခြားရှိမနေပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဘုရားကိုသိသလား? ဘုရားကကော ကျနော်တို့ကိုသိသလား? သူ့ကို ကျနော်တို့ ဘဝထဲကနေ ပစ်ပယ်ထားသလား? မဟုတ်ရင် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသလား? ဘုရားကိုသိရှိခြင်းကနေ ကျနော်တို့အထဲမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့အမြင်ကို ရှိလာစေပြီး မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးပါတယ်။ သူနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းကနေ ဘဝအခြေအနေတွေ တိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဘုရားက ကျနော်တို့ဘဝရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်သင့်တာလဲ? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့ကိုသိရှိခြင်းမှအပ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု ဒါမှမဟုတ် စစ်မှန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သူဟာဘုရားဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့က ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ သူက ကျနော်တို့အပေါ် မမှီခိုဘူး၊ ကျနော်တို့ကပဲ သူ့အပေါ် မှီခိုရမှာဖြစ်တယ်။ ဘဝမှာ သူ့ကိုလိုအပ်ဖို့ ကျနော်တို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ သူမပါဘဲ ဘဝကို မောင်းနှင်နိုင်ပေမယ့် အချည်းနှီးပဲဖြစ်ပါမယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ကိုရှာဖွေဖို့ အလိုရှိပါတယ်။ သူ့ကိုတွေ့ရှိဖို့နဲ့ ကျနော်တို့ဘဝထဲမှာ သူ့ကိုပါဝင်စေဖို့ အလိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက- သူ့ကိုကျနော်တို့ ဥပေက္ခာပြုကြတာပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက ဒီလိုပြောပါတယ်- “ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးများကဲ့သို့လမ်းလွဲကာ မိမိတို့သွားလိုရာလမ်းသို့ လိုက်လျက်နေကြ”၁၄ တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဘုရားမပါဘဲ ကျနော်တို့ဘဝကိုမောင်းနှင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကို သမ္မာကျမ်းစာက “အပြစ်” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ပြောတဲ့ ဟီတာက အပြစ်နဲ့ပါတ်သက်လို့- “ကျနော်တို့ စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကိုဝင်တုန်းက ခရစ်ယာန်မဟုတ် ပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကျနော် နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးတွေတက်တယ်၊ လူမျိုးခွဲခြားရေးဝါဒနဲ့ လူမှုတရားမျှတရေး လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တွေယူတယ်။ ပြီးတော့ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုအသင်းတိုက်မှာပဲ ဘဝကိုမြှုပ်နှံ ထားတယ်။ ကျနော့်စွမ်းအားတွေနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သိသာတဲ့ထူးခြားမှုတွေ လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ နွမ်းပါးတဲ့မူလ တန်းကလေးတွေကို စာပြတယ်။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေအတွက်ဆောက်ထားတဲ့ဂေဟာတစ်ခုမှာ နေ့ကျောင်းဖွင့်တယ်။ စားစရာ မရှိတဲ့သူတွေအတွက် စားကြွင်းစားကျန်တွေ ကောက်ခံပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ပိုကြိုးစားလေ၊ ကျနော်ပိုစိတ်ပျက်လေပါပဲ။ ဗျူရိုကရေစီစနစ်၊ ဥပေက္ခာတရား၊ ပြီးတော့ အပြစ်တရားကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ လူ့သဘောသဘာဝတစ်ခုလုံးကိုက အစကနေပြန်စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ ကျနော် စပြီးစဉ်းစားလာတယ်။” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေး = ဘုရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး
ကမ္ဘာကြီးရဲ့အဖြစ်သနစ်တွေအားလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် အချိန်ကာလပြောင်းလဲမှုနဲ့ တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေက ဒီလောက်အရေးမပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ? လူသားတွေအနေနဲ့ အဓိကပြဿနာကတော့ ကျနော်တို့ကိုကျနော်တို့ ဘုရား သခင်ထံကနေ ကင်းကွာနေကြတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး၊ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နေပါတယ်။ ဘုရားက ဒါကိုသိတယ်၊ ဒါကြောင့် သူ့ထံကနေဝေးကွာနေခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းချက် တစ်ခုကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ထံလှည့်ပြန်ဖို့လမ်းကြောင်းကို ခင်းပေးခဲ့တာကတော့ ယေရှုခရစ်တော်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ်းစာက “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။”၁၅ လို့ ဆိုပါတယ်။ ယေရှုခရစ်တော်ဟာ ကျနော်တို့နေရာမှာ ကျနော်တို့ကိုယ်စား ကားစင်တင်ပြီးအဆုံးစီရင် (ရှေးယခင်ကွပ်မျက်ခြင်းပုံစံ) ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ သေဆုံးပြီး မြှုပ်နှံခံရတယ်၊ ပြီးတော့ သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကိုယ်စားခံသေခြင်းကြောင့် ကျနော်တို့ ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်မှုထဲ ဝင်ရောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် -- “ထိုသူကိုလက်ခံသမျှ သောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။”၁၆ လို့ ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ တကယ်ရိုးရှင်းပါတယ်- ဘုရားသခင်က ကျနော်တို့နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ဆက်သွယ်ချက် ရရှိချင်တယ် -- ဒါကြောင့် ယေရှုထံမှ တဆင့် အဲဒီဆက်သွယ်ချက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘုရားကိုရှာဖွေဖို့နဲ့ သူ့ကို ဘဝထဲဖိတ်ခေါ်ဖို့ပဲ လိုပါ တော့တယ်။ လူတွေက ဒါကို ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် လုပ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ ဘုရားသခင်နဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်း စွာ စကားပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ စိတ်အရင်းခံအတိုင်း ဒီလိုဆုတောင်းချက်ကိုပြောပြီး ဘုရားသခင်ကို ကျနော်တို့ အခုပဲ ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ- “ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော့်ကို သိရှိလိုပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ကို ကျွနု်ပ်ဘဝထဲ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ဖူးပါ။ သို့သော် ယခုပြုလိုပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ထံမှဝေးကွာနေခြင်းအတွက် ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကို ခံယူလိုပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီး ကိုယ်တော်နဲ့ဆက်သွယ်မှု ရရှိနိုင်ဖို့ရာအတွက် ကျနော့်ကိုယ်စား ယေရှုအသေခံခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံ ပါပြီ။ ယနေ့မှစ၍ ကိုယ်တော့်ကို ကျွနု်ပ်ဘဝထဲ ဝင်ရောက်စေလိုပါတယ်။”
ဘုရားသခင်ကို သင့်ဘဝထဲဝင်ရောက်ဖို့ အမှန်တကယ် ဆုတောင်းပြီးပြီလား? ဒါကို သင်နဲ့ဘုရားကပဲ သိပါတယ်။ တောင်း ပြီးပြီဆိုရင် သင့်မှာ အများကြီးမျှော်လင့်စရာရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင့်က သူနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းကြောင့် သင့်ရဲ့လက်ရှိဘဝကို များစွာသာလွန်တဲ့ ကျေနပ်မှုရရှိစေမယ်လို့ ကတိတော်ပေးပါတယ်။၁၇ သင့်အထဲမှာ ကျိန်းဝပ်မယ်လို့လည်း မိန့်ဆိုပါတယ်။၁၈ ပြီးတော့ ထာဝရအသက်ကိုလည်း ပေးပါတယ်။၁၉
နယူးအင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မယ်လီဆာက- “ကျမငယ်ငယ်လေးတုန်းက အမေကအဖေ့ကို ကွာရှင်းခဲ့တော့ ဘာဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာတောင် ကျမကောင်းကောင်းမသိခဲ့ဘူး။ အဖေ အိမ်မလာတော့ဘူးဆိုတာပဲ သိခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ တော့ အဖွားဆီသွားလည်တဲ့အခါ အဖေ သမီးကိုရိုက်ပြီးတော့ ပြန်မလာတော့တာလဲဆိုတာ နားမလည်ဘူးလို့ပြောလိုက် တယ်။ အဲဒီတော့ အဖွားက ကျမကိုပွေ့ပိုက်ပြီး သမီးကိုဘယ်တော့မှပစ်မထားမယ့်သူတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ သူက ယေရှုပဲလို့ ပြောပါတယ်။ အဖွားက ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၃း၅ ထဲက “ငါသည် သင့်ကိုမစွန့်၊ သင့်ကို အလျှဉ်းပစ်၍မထား” ဆိုတာနဲ့ ဆာလံကျမ်း ၆၈း၅ ထဲက “ဘုရားသခင်သည် မိဘမဲ့သူများကိုစောင့်ရှောက်၍ မုဆိုးမများကို ကာကွယ်တော်မူ၏” ဆိုတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်တွေကို ကိုးကားခဲ့တာပါ။ ဘုရားသခင်က ကျမရဲ့ဖခင်အရာခံယူချင်တယ်ဆိုတာကြားရတော့ ကျမအရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားသွားခဲ့တယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
သင့်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာမှာ ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ၊ ဘုရားသခင် ကိုယ့်အတွက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိခြင်းအားဖြင့် စိတ်ငြိမ်းအေးမှုဆို တာရှိပါတယ်။ အနာဂတ်က ဘာကိုပဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါစေ၊ အစဉ်မပြောင်းလဲ တည်ရှိနေတဲ့သူအဖြစ် ဘုရားသခင်ကို သင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
(၁) သမ္မာကျမ်းစာထဲက ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၄၄း၈ နှင့် မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်း ၃း၆ (၂) ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၃း၈ (၃) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၄း၂၇ နှင့် ၁၆း၃၃ (၄) ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၄၃း၁၁ နှင့် ၄၅း၂၂ (၅) ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ရး၂၄-၂၇ (၆) ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၄၆း၉-၁ဝ (၇) ဆာလံကျမ်း ၄၆း၁ (၈) ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း ၂၉း၁၃ (၉) ကောရိန်သုသြဝါဒစာ ဒု-စောင် ၄း၈-၉ (၁ဝ) နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်း ၁းရ (၁၁) ပေတရုသြဝါဒစာ ၁-စောင် ၅းရ (၁၂) ဆာလံကျမ်း ၁၄၅း၁၇-၁၉ (၁၃) ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁ဝး၂၉-၃၁ (၁၄) ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၅၃း၆က (၁၅) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၃း၁၆ (၁၆) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁း၁၂ (၁၇) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁ဝး၁ဝ (၁၈) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၄း၂၃ (၁၉) ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ၁-စောင် ၅း၁၁-၁၃